eNasha.com - तीन वर्षको दुःख
यम चौलागाइँ त्यसो त कलेज पढाउँछन् । तर कलेज पढाएर मात्र उनलाई चित्त बुझेन । लगभग एक दशकदेखि सिनेमासम्बन्धी लेखहरु लेखिरहेका कारण उनलाई चलचित्र उद्योगसम्बन्धी नै केही नयाँ काम गर्न मन लाग्यो । उनीसँग सोच मात्र थियो, अर्थ अर्थात् पैसा थिएन । तापनि उनले 'नयाँ काम हो कोही न कोही भेटिएलान् नि !' भनेर काम शुरु गरे । हिजोसम्म उनको अभियानलाई सघाउन रत्तिभर जाँगर नदिनेहरुसमेत अहिले उनको कामबाट मख्ख परेका छन् ।
अब प्रशंसा पुग्यो, यिनले के गरे त भन्ने तपाइँलाई लागिसकेको हुँदो हो । त्यसैले सीधै उनको कामतिर तपाइँलाई तानौँ । उनले चलचित्रका सारथी नामक पुस्तक हालै सार्वजनिक गरेका छन् । तीन वर्षको गहकिलो मिहिनेत गरेर तयार पारिएको यो किताब नेपाली चलचित्रका कलाकारसम्बन्धी लेखिएको पहिलो किताब हो ।
यो किताब लेख्ने सोच उनलाई कसरी पलायो त ? "नेपाली चलचित्रका विषयमा पढ्न लायक् कुराहरु किताबी रुपमा मैले पाइनँ । यो पुस्तक निकाल्दा अग्रजहरुको सम्मान पनि हुने र नयाँ पुस्तालाई पनि प्रेरणा मिल्ने हुँदा मैले यो किताब निकालेको हुँ", यमले इनशाडटकमलाई बताए ।
यस पुस्तकमा १९ जना स्वर्गीय चलचित्रकर्मीहरुको परिचय रहेको छ भने बाँकी ३२८ जना जीवित व्यक्तिहरुको बारेमा लेखिएको छ ।
पुस्तक महत्वपूर्ण भए पनि हुनुपर्ने व्यक्ति छुटेका र छुट्नु पर्ने व्यक्तिका बारेमा हालिएका कारण केही खल्लो लागे पनि यस किताबको अर्को संस्करणमा ती कमजोरीहरु सुधारिने उनले बताएका छन् ।
यो पुस्तक निकाल्नलाई आफूले निकै दुःख व्यहोर्नु परेको र यदि चलचित्रकर्मी वसन्तकुमार श्रेष्ठको सहयोग नपाएको भए यो किताबको प्रकाशन सम्भव नहुने उनले बताए ।